Yadanar More and More Family Group of Companies Limited မှ Showroom Staff (အရောင်းပြခန်းဝန်ထမ်း) | MyJobs
/ Showroom Staff (အရောင်းပြခန်းဝန်ထမ်း)
Showroom Staff (အရောင်းပြခန်းဝန်ထမ်း)
ရနျကုနျမွို့အတှငျးတှငျ ဖှငျ့လှဈထားရှိသော လကျဝတျရတနာအရောငျးဆိုငျမြားတှငျ အရောငျးဝနျထမျးအဖွဈ တာဝနျယူဆောငျရှကျရမညျဖွဈသညျ။
§Promote sales by assisting customers and offering suggestions.
§Ability to communicate professionally in person and by phone.
§Stock shelves, counters, and tables with merchandise.
§Provide prompt and courteous service to all customers.
§Utilize product knowledge to promote sales.
§Responsible for ensuring store appearance is clean and presentable at all times.
§Stay informed of store policies, procedures, and promotions.
§အသက် (၂၀)နှစ်မှ (၂၅)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
§အရောင်းလုပ်ငန်းအား အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသူများ လျှောက်ထားသင့်သည်။
§ရုပ်ရည်သင့်တင့်သူ၊ စကား ပြောပြေပြစ်ပြီး သွက်လက်ချက်ချာစွာ ဆောင်ရွက်တတ်သူ၊ ရိုးသားသူ ဖြစ်ရမည်။
§မိမိ၏အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ပတ်သက်၍ မိဘ/အုပ်ထိန်းသူမှ အာမခံချက်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။